VAHAOLANA ny lesoka "com.google.process.gapps dingana nijanona" | Vaovao momba ny gadget
Ny fomba fanamboarana ny lesoka "com.google.process.gapps dia nijanona"
Ignatius Room | | Finday, Software, Tutorials
Ny iray amin'ireo olana natrehin'ny Android hatrany hatramin'ny nanombohany ny tsena dia ny mifanentana amin'ireo fitaovana apetraka aminy, satria tsy natao manokana ho an'ny fitaovana manokana, toa ny mitranga amin'ny iOS an'ny Apple sy ny iPhone. Io, fa tsy misy hafa, no olana lehibe atrehin'ireo mpamokatra rehefa manavao ny fitaovany amin'ny kinova vaovao, nanomboka tsy vitan'ny hoe manatsara ny kinova Android amin'ny fitaovany ihany izy ireoSaingy tsy maintsy ampian'izy ireo ihany koa ny sosona mahafaly an'ny personalization.
Na eo aza izany dia afaka mahita tsy fetezana foana isika, na noho ilay kinova Android izay tsy nohamarinina tanteraka ho an'ny maodelin'ny terminal anay, na noho ny sosona fanaingoana. Ny iray amin'ireo lesoka mahazatra indrindra dia misy fiantraikany amin'ny fampiharana sy ny fiasan'ny terminal. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity amboary ny lesoka "nijanona ny fizotran'ny com.google.process.gapps", lesoka izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy mamela anay misintona rindranasa avy amin'ny Google Play Store.
Io lesoka io dia nanomboka nipoitra tao amin'ny Android Kitkat 4.4.2 ary nanomboka teo dia toa tsy niasa saina ireo tovolahy tao amin'ny Google mba hitady vahaolana izay tsy manery ny mpampiasa hampiasa Internet, satria na dia amin'ny Android Android At ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity dia ao amin'ny Android 8.0 Oreo isika, mbola olana iray hafa noho ny miverimberina ao amin'ny fantsona maro. Etsy ambany izahay dia manolotra vahaolana samihafa momba an'ity olana ity, manalavitra ny vahaolana mahery indrindra indrindra amin'ny fotoana rehetra izay misy famerenana mafy ny fitaovana ary mamafa ny atiny rehetra.
1 Hamafana ny cache amin'ny rindrambaiko izay manome olana antsika
2 Fafao ireo fampiharana farany napetrakao
3 Fafao ireo fanavaozana farany azonao alaina
4 Avereno ny safidin'ny fampiharana
5 Fafao ny angona avy amin'ny serivisy Google Play
6 Fitaovana famerenana amin'ny laoniny
Hamafana ny cache amin'ny rindrambaiko izay manome olana antsika
Raha mitranga tsy tapaka io hadisoana io isaky ny manokatra rindranasa ianao dia azo inoana fa ilay rindranasa irery ihany fianjerana miaraka amin'ny rafitra, koa ny hetsika voalohany tokony hataontsika dia esory ny cache ao aminy.
Mba hamafana ny cache an'ny application dia mila mandeha any amin'ny Settings> Applications fotsiny isika ary misafidy ilay fampiharana apetraka. Rehefa manindry azy isika dia tsy hidina any ambany ary tsindrio ny Clear cache.
Fafao ireo fampiharana farany napetrakao
Rehefa hitantsika ny olana amin'ny fampiharana iray izay napetraka tao amin'ny fitaovantsika nandritra ny fotoana kelikely, dia tena azo inoana fa ao anaty ilay izy fampiharana farany napetrakay, zavatra izay indrisy fa mahazatra amin'ny Android.
Mba hamahana ity olana miasa ity dia ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia esory ny rindranasa, na mivantana amin'ny alàlan'ny Settings> Applications, na amin'ny alàlan'ny fampiharana antoko fahatelo izay mamela antsika hanatanteraka an'io asa io.
Fafao ireo fanavaozana farany azonao alaina
Raha toa ka nametraka ny fanavaozana ny fampiharana izahay dia nanomboka nampiseho taminay izany hafatra izany dia mety ho hita ao amin'ny fanavaozana farany ny rindranasa napetraka, ka hialana amin'ny olana, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manaisotra ireo fanavaozana.
Raha hamafana ireo fanavaozana dia miverina amin'ny Settings> Applications izahay ary misafidy ilay fampiharana voalaza. Eo an-tampony, hitantsika ny safidy fijanonana Force ary Esory ny fanavaozana. Amin'ny fisafidianana ity farany, ny fitaovantsika dia hanafoana ny soritry ny fanavaozana farany ary hamela ilay fampiharana toa ny tany am-piandohana, rehefa niasa tsara.
Avereno ny safidin'ny fampiharana
Ny vahaolana farany arosonay, alohan'ny hidirantsika amin'ny inona mety ho io no mahatonga ny olana ary tsy misy ifandraisany amin'ny rindranasa mivantana, fa amin'ny rafitra, azontsika atao ny mamerina ny safidin'ny rindranasa. Raha hamerina ny safidin'ireo fampiharana dia mandeha any amin'ny Settings> Applications izahay ary tsindrio ny kiheba rehetra.
Manaraka izany, mankany amin'ny menio miorina amin'ny zoro ambony ambony amin'ny efijery izahay, asehon'ny teboka mitsivalana telo, ary mifantina Avereno ny safidy. Alohan'ny hanamafisana ny fizotrany, Android dia hampiseho amintsika hafatra manamarina fa ny safidin'ny rindranasa kilemaina rehetra, fampandrenesana momba ny rindranasa kilemaina, fampiharana ho an'ny hetsika tsy mandeha amin'ny laoniny, fameperana angon-drakitra ho an'ny fampiharana ary ireo fameperana alàlana rehetra
Raha vantany vao nahavita an'ity dingana ity izahay, ary nanamarina ny fomba niasan'ny fampiharana izay nanome olana antsika dia tokony hiverina indray izahay apetraho tsirairay ny toe-javatra Ny rindranasa tsirairay dia nanana, toy ny fidirana amin'ny toerana, angona finday ...
Fafao ny angona avy amin'ny serivisy Google Play
Raha aorian'ny fanandramana ireo safidy teo aloha, dia toa manondro ny zava-drehetra fa tsy mipetraka ao amin'ireo rindrambaiko ny olana, fa hitantsika ao amin'ny serivisy Google Play izany. Google Play Services no rafi-pandaminana Android izay mamela ny fisian'ny rindranasa rehetra vaovao hatrany ary manome antoka koa izy ireo fa ny rindranasa rehetra dia havaozina hatrany amin'ny kinova farany misy.
Amin'ny fanaovana izany, ho foana ny safidinao sy ny toerana napetraka ao amin'ny Google Play. famerenana ny toerana misy anao. Raha hamafana ny angona avy amin'ny serivisy Google Play dia mankany amin'ny Settings> Applications izahay ary tsindrio ny Google Play Services. Manaraka izany dia mandeha mankany amin'ny Delete data izahay, ao anatin'ny faritra Storage ary manamafy ny famafana ny data rehetra avy amin'ity rindrambaiko ity maharitra.
Fitaovana famerenana amin'ny laoniny
Raha tsy misy amin'ireto fomba ireto manamboatra ny olan'ny com.google.process.gapps, azo atao, na dia tsy inoana aza, fa ao anaty ilay olana fanavaozana farany ny fitaovana voaray, Ka mba hialana amin'izany dia tsy maintsy averina apetrakao amin'ny ozinina ilay fitaovana. Amin'ny fanatanterahana an'ity dingana ity dia hiverina amin'ny andiany voalohany an'ny Android ilay fitaovana izay nidina an-tsena.
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny fikirakirana ny lozisialy ao amin'ilay fitaovana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Settings> Backup ary hamerenana ary misafidy ny safidy famerenana angon-drakitra Factory isika. Hamafana ny rindranasa rehetra io fizotran-javatra io, ary koa ny sary rehetra sy ny angona izay ao anaty faran'ny terminal, koa voalohany indrindra dia tsy maintsy manao kopian'ny tahirin-kevitra rehetra tadiavinay izahay, indrindra ireo sary sy horonan-tsary izay nalainay miaraka amin'ny fitaovana, nanomboka taty aoriana tsy hisy fomba hamerenana azy ireo intsony a posteriori, ho an'ny rindranasa marobe izay izahanay toetra.
Safidy iray anaovana an'ity kopia ity ny fidirana a karatra fitadidiana amin'ny fitaovana ary afindrao ny sary sy horonan-tsary rehetra, ary koa ny angon-drakitra izay tianay hotehirizina, mba hananana azy ireo indray rehefa averinay ilay fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny fomba fanamboarana ny lesoka "com.google.process.gapps dia nijanona"
Salama, mahazo an'ity lesoka ity aho nefa tsy mamela ahy hiditra fanovana na aiza na aiza satria miseho indray ny hafatra ... raha eo amin'ny fikirana ... nijanona ny toe-javatra ... sns. Amin'ny zavatra rehetra ezahiko hiditra. Ka ny vahaolana omenao ato amin'ity forum ity dia tsy mety amiko. Misy raikipohy hamerenana ny takelaka misy ny orinasa raha tsy mila miditra safidy hafa? satria tsy hitako izay vahaolana hafa ... raha fantatrao fa tiako izany raha afaka manampy ahy ianao
Miombon-kevitra amin'ny hevitra teo aloha aho, ary ny fanazavana omeny dia tsy mitombina mihitsy satria raha ny olana dia tsy manome fidirana satria najanona ny fampiharana, tsy mitombina izay lazainao satria ahoana no idiran'ny olona hamafana data cache, raha samy fampiharana milaza izany aminao,
Miombon-kevitra amin'ny hevitra teo aloha aho, ary ny fanazavana omeny dia tsy mitombina mihitsy satria raha ny olana dia tsy manome fidirana satria najanona ny fampiharana dia tsy mitombina izay lazainao satria ahoana no idiran'ny olona iray hamafana data cache, raha mitovy ny fangatahana ataon'ny tsirairay fampiharana, mmmmm
Ny varotra Amazon tsara indrindra anio (31-01-2018)
HTC dia namoy ny departemanta R&D ho takalon'ny $ 1.100 miliara